Iividiyo ezi-7 kufanele ukuba uzivelise ukuze wandise iZiphumo zokuThengisa | Martech Zone
Iividiyo ezi-7 kufanelekile ukuba uzivelise ukuze wandise iZiphumo zeNtengiso
Iipesenti ezingama-60 zabatyeleli besiza ziya kuthi Bukela ividiyo kuqala ngaphambi kokufunda isicatshulwa kwindawo yakho, iphepha lokufika, okanye ijelo loluntu. Ngaba ufuna ukwandisa ukuzibandakanya nenethiwekhi yakho okanye iindwendwe zewebhu? Veza ezinye iividiyo ezinkulu ekujolise kuzo kunye nokwabelana nabaphulaphuli bakho. I-Salesforce idibanise le infographic enkulu kunye neendawo kwiindawo ezi-7 zokubandakanya iividiyo ukuqhuba iziphumo zentengiso:
Nika a wamkela ividiyo kwiphepha lakho likaFacebook kwaye uyipapashe kwicandelo Malunga. Ungongeza le vidiyo kwithala leencwadi levidiyo olilayishe kwiphepha lakho. Qiniseka ukuba ubandakanya isizinda sakho ukuqhuba iindwendwe zibuyele kwikhaya lakho lasekhaya.
Ngamaxesha athile yabelana ngevidiyo kwi-Twitter Apho uxoxa ngezihloko okanye wabelana ngeenkcazo malunga nophawu lwakho, imveliso kunye nenkonzo. Iividiyo ekwabelwana ngazo ku-Twitter ziboniswa kwibhokisi yeendaba esecaleni kwiphepha lakho.
Phina iividiyo kwiPinterest kwiibhodi zezihloko ezifanelekileyo ukonyusa umbono kwijelo lakho le-Youtube. Ewe kunjalo, Lungiselela ijelo lakho le-Youtube ukuqhuba ukugcwala kwindlela yokuguqula.
Yongeza ividiyo kwiprofayile yakho ye-LinkedIn ebonisa italente yakho, uphawu, iimveliso kunye / okanye iinkonzo.
Nika amandla ukuKhangela ukuKhangela okuKhanyayo Youtube kwaye wongeze iTreyini yetreyini. Le yividiyo edlalwa kubantu abangabhalisanga okwangoku. Khuthaza abantu ukuba babhalise kwisitishi sakho ngale vidiyo.
Yongeza ubungqina bevidiyo kwiphepha lakho lokufika ukongeza ubunyani kunye nokuthembela kumnxeba wesenzo kwiphepha.
Yongeza ividiyo kwikhasi lasekhaya lenkampani yakho (okanye ikhonkco kwiphepha ngalinye) elichaza inkampani yakho kunye neemveliso okanye iinkonzo zayo.
Sukucinga kakhulu ngezi vidiyo! Ingcebiso yam kukugcina iividiyo zakho phakathi kwemizuzwana engama-30 kunye nemizuzu emi-2 xa uzisebenzisa ngolu hlobo ukongeza kwezinye iiasethi zakho zedijithali. Qiniseka ukuba umgangatho wakho wesandi ubalasele kwaye ividiyo incamathele kwinqanaba ngokubiza isenzo de kube sekupheleni. Gcina iividiyo zakho zichanekile nabantu bokwenyani kunye neendawo zokwenyani- ipolishi yentengiso kamabonwakude okanye imvelaphi eluhlaza yesikrini ayamkelekanga xa ufaka ividiyo kwisicwangciso sentlalo okanye sewebhu.
Zininzi iindlela zokufaka ividiyo kwisicwangciso sakho sentengiso kwi-Intanethi. Unokongeza ividiyo kwimidiya yakho yoluntu, iphepha lokuthengisa, ukuthengisa umxholo, inkonzo yabathengi, kunye nokunye ukwandisa amathuba okuba abaphulaphuli bakho bayakuyisebenzisa imiyalezo yakho bathathe inyathelo.
Nantsi infographic, Iindlela ezi-7 zokubandakanya ividiyo kwiPhulo lakho lokuThengisa, evela eSalesforce Canada.
tags: ividiyo yekhasi lasekhayaiividiyo zephepha lokufikaIiVidiyo zeNtengisoukuthengisaintengiso Canadaiividiyo zokungqinaividiyo ye-facebookividiyo kwiphepha lasekhayaividiyo yamaphepha okufikaividiyo yokudibanisaividiyo yepinterestividiyo ye-twitterividiyo ye-youtubeukuthengisa ividiyoiqhinga lokuthengisa ividiyo
Uhlobo: Inkqubo edityanisiweyo yoThengiso yoPapasho lweDijithali